राज्यले बनाउँदै गरेको गुरुयोजनामा निजी क्षेत्रका हरेक विषयवस्तु समेटिनु पर्छ : खनाल - Tulsipur Online
राज्यले बनाउँदै गरेको गुरुयोजनामा निजी क्षेत्रका हरेक विषयवस्तु समेटिनु पर्छ : खनाल
Posted by Admin | ३० श्रावण २०७८, शनिबार १४:२३ |
देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघ वि.सं. २०५६ सालमा गठन भएको हो । सामाजिक संस्थाकारुपमा दर्ता भई व्यवसायीहरुको हक हित र सुरक्षाका लागि पहलकदमी चाल्दै आएको संघमा अहिले एक हजार बढी ब्यापारीहरु आबद्ध छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा दर्ता भएका दाङ्ग जिल्लामा तिन वटा उद्योग वाणिज्य संघ मात्र छन् । घोराही उद्योग वाणिज्य संघ, तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघ र देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघ लमही । देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघ लमहीले लमही क्षेत्रका उद्योगी ब्यापारीहरुका लागि विभिन्न किसिमका कामहरु गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खगेश्वर खनालसँग तुलसीपत्र राष्ट्रिय दैनिक देउखुरीका संवाददाता प्रिया स्मृती गजमेरले गरेको कुराकानी ।
अध्यक्ष ज्यु स्वागत छ, यसपालि सहमतिको आधारमा अध्यक्ष बन्न पाउँदा कस्तो महशुस भएको छ ?
– सर्वप्रथम त धन्यवाद, लामो समयपछि देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघमा सहमतिमा अध्यक्ष बन्न पाउँदा खुशी नै छु । सहमति अनुसार पदाधिकारी आएका छौं यो सकारात्मक पक्ष हो । हरेक पटक चुनाबी माहौलबाट पदाधिकारी आउने परिपाटीको अन्त्य होस् भन्ने सूचना जानेछ भन्नेमा म ढुक्क छु । सबै राजनीतिक दलबाट सहमति गरेर आएकोले काम गर्दा सबैको सहयोग भएको छ ।
उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष भइसकेपछि यो अवधिमा यहाँले गरेका कामहरु के–के हुन ?
– म अध्यक्ष भएर आएपछि धेरै काम भएको छ । म सहित हाम्रो टिमले अक्सिजनका सिलिन्डर खोज्ने, खाली सिलिन्डर भरेर लमही अस्पताल र देउखुरी ब्यापी कोरोना अस्पताललाई दिने, फ्रन्ट लाइनमा खटिएर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार लगायतलाई स्वास्थ्य सामाग्री बाड्ने, करमा छुट दिलाउने, उद्योग वाणिज्य संघ लमहीबाटै ब्यावसायिक कर बुझाउने जस्ता महत्वपूर्ण काम गरेका छौं ।
कोरोना कहरले थलिएको देउखुरी क्षेत्रको उद्योग व्यापारलाई उकास्न यहाँको तर्फबाट के कस्तो प्रयास भयो ?
– कोरोनाले थिलाथिला बनाएका ब्यापारीहरुका लागि थोरै भए पनि राहत होला भनेर हामीले घरधनीसँग घरभाडा छुट गर्नलाई अपिल गरेका छौं । त्यसैगरी व्यापारीले तिर्ने करको कुरामा पनि छुट गराएका छौं ।
खुल्ला भन्सारका कारण देउखुरी क्षेत्रको ब्यापार ओरालो लाग्दो छ भन्ने ब्यापारीको गुनासो छ नि ?
– तपाईले गरेको प्रश्न अत्यन्तै जायज छ, खुल्ला सीमा क्षेत्रबाट सरकारलाई कर छलेर सामान ल्याएर ब्यापार गर्नेहरु पनि छन । यस्तो प्रकारका ब्यापारीलाई रोक्नु पर्दछ । यो आवश्यक पनि छ । यदि हामीले यो कार्यलाई तत्काल बन्द गर्न सकेनौं भने राज्यलाई कर तिरेर व्यवसाय गर्नेहरुको अवस्था अझै दयनीय हुनसक्छ । सरकारलाई कर तिरेर व्यवसाय गर्नेले घाटा खाएर ब्यापार गरिरहेको छ, जसले कर तिर्दैन त्यसले ग्राहकलाई पनि ठगि रहेको हुन्छ भने कर पनि छलि गरिरहेको छ ।
स्थानीय सरकारसँग कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नु भएको छ ? सहकार्य कस्तो छ ?
– स्थानीय सरकार भनेको निजी क्षेत्रको अभिभावक हो । ब्यवस्थित बजार, सुरक्षित ब्यवसायी हाम्रो चाहाना हो । त्यस्तै अब्यवस्थित पार्किङ्गलाई ब्यवस्थित गरिदियो भने लमही बजारको मुहार नै फरक देखिने छ । स्थानीय सरकारसङ्ग प्रायः सहकार्य भैरहेको छ । राजधानी क्षेत्रको एउटा ठूलो संस्था देउखुरी उद्योग बाणिज्य संघको अध्यक्षको नाताले राजधानीको शहर निर्माणको लागि बन्दै गरेको
गुरुयोजनामा यहाँहरुको तर्फबाट सुझाव के छ ?
– पहिलो कुरा त राप्ती उपत्यकामा राजधानी आउनु हामी दङ्गालीबासीका लागि धेरै खुशीको कुरा हो । हामी दङ्गालीका लागि यो भन्दा गर्बको कुरा अरु हुन सक्दैन । अर्को कुरा राज्यले बनाउदै गरेको गुरुयोजनामा निजि क्षेत्रका हरेक विषयबस्तु समेटिने छन भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
अटो भिलेज निर्माण गर्ने योजनाले सफलता पाउन सकेन नि ,के भन्नुहुन्छ ?
– पछिल्लो समय यताको निकै महत्वपूर्ण कुरा उठान गर्नु भयो । लमही बजारको दृश्य नै कुरुप हुन थालेपछि हामीले स्थानीय सरकार सङ्ग हारगुहार माग्यौ । अटो भिलेज निर्माणका लागि स्थानीय सरकार प्रमुख आफै खटिनु भाएको थियो । धेरै छलफल गरियो, कहाँनेर राख्दा उचित होला भनेर, तर कतै जग्गा उपलब्ध नभएपछि अर्जुन खोलाको तिरमा राखौं भन्ने मौखिक सहमति भएको थियो त्यो सहमतिलाई डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीले स्वीकार नगर्दा काम रोकिएको हो । तर हामीले हार मानेका छैनौ । उधोगी ब्यापारीका हक अधिकारका लागि अन्तिमसम्म लडिरहने छौं ।
अन्त्यमा लमही क्षेत्रको समग्र बजार क्षेत्रको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला ?
– लमही क्षेत्रलाई ब्यवस्थित गर्नका लागि सबैले आ–आफ्नो पक्षबाट सक्दो सहयोग गर्न जरुरी छ । एक्लै नगरपालिका, उद्योग वाणिज्य संघले मात्र गरेर सम्भव छैन । बिच सडक बाटोमा अव्यवस्थित तरिकाले राख्ने ठेलालाई हटाउनु पर्छ । नालीदेखि बाहिर कुनै पनि सामान राखिनु हुँदैन । फोहोर ब्यवस्थापनलाई चुस्तदुरुस्त राख्नु पर्छ । ट्राफिक ब्यवस्थापन गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ । यति गरियो भने बजार क्षेत्रलाई सफा र सुन्दर बनाउन सकिन्छ ।
Previousबाबुले हानेको गोली लागेर छोराको मृत्यु
Nextनेत्रलाल अभागीको शालिक अनाबरण